आचार्य प्रभा – Page2– मझेरी डट कम
अप्ठ्यारै छ जिन्दगी यो हाँसी हाँसी काट्छु भन्न
पिरतीको डोरी पनि सहजैले बाट्छु भन्न ।
जमानाको के पो भर ? निति नियम ढली सके
अतितमा झैँ चोखो प्रीति स्वच्छ मनले साट्छु भन्न ।
अनेसास कोलोराडोको नियमित कवि गोष्ठी सम्पन्न (२०११, अक्टोबर) तथा १०२ औँ लक्ष्मी जयन्ती
हरेक बर्ष झैं यो बर्षको देवकोटा जयन्ती पनि अनेसास कोलोराडो च्यापटरले बडो भब्यताको साथ यही शनिबार अक्टोबर २९ का दिन मनायो ।
सयपत्री, मखमली गाँस्दैछु म भाइलाई भनी
रुमालमा आशिष् टिको साँच्दैछु म भाइलाई भनी ।
सम्झना र कल्पनामै बित्ने भयो भाइटिका हरे
यम्दुत् तर्ने फलामे पुल् भाँच्दैछु म भाइलाई भनी ।
कसो गरी आउँला माइती
कसो गरी आउँला माइती साइत नजुरे
तिहारमा चेलीको बाटो नकुरे ।
मन त मेरो उडिजान्छ माइती घरकै संघार
यो पालीको तिहारमा आएन है बहार ।
दीप्सको ‘आगो’को लप्कासँग खेल्ने आँट
दीप्सको अति चर्चा गर्नै पर्ने कविता मध्ये एक कविता हो “आगो” । हुन त यो कविता मैले रोजी हालेँ यसको बारेमा केही बोल्नलाई । तर मलाई नै हिम्मत छैन कि यो कविताको म कसरी ढोका उघारौं ? मेरो अर्थ यो हो कि उनको यो कविताका शब्दहरू क्लिष्ट नभएर सरल शब्दमा नै छन् तथापि कविताभाव नै गहन छन् जस्लाई मैले बुझेर पनि बुझ्न सकिरहेकी छैन र नबुझेर पनि यसको बिषयमा केही भन्न आतुर छु ।
गजल स्वर सम्राट यो धर्तीमा रहेनन् आज
जग्जित मरे भनेर कसैले नि भनेनन् आज ।
अमर त्यो हुन्छ जो धर्तीमा असल बन्छन्
मरेर पनि जग्जित मरेसरी बनेनन् आज ।
दशैंको त्यो रम्झमलाई मनमा लिई हाँस्दैछु
दशैंको त्यो रम्झमलाई मनमा लिई हाँस्दैछु म
परदेशमा भए पनि अतितको याद साँच्दैछु म ।
फुले होलान् सयपत्री आँगनमा मुस्काउँदै
यता भने काँडाघारी मनमा पाली बाँच्दैछु म ।
अनेसास कोलोराडोको नियमित कवि गोष्ठी सम्पन्न (२०११, सेप्टेम्बर)
अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) कोलोराडो च्याप्टरले नियमित संचालन गर्दै आईरहेको “साहित्य सँगम”मासिक कार्यक्रम यो पटक (सेप्टेम्बर अंक) श्रीसमीर आचार्य तथा वहाँकी श्रीमती नुजु आचार्यको आतिथ्यमा वहाँहरूको निवासमा भब्यताको साथ सम्पन्न भयो ।
लाहुरे जीवन ब्यतित गर्दै भए पनि साहित्यलाई माया गर्नु र साहित्यको भण्डार भर्ने सदिच्छा राख्नु भनेको एउटा लाहुरे बिचारको उत्कृष्ट नमुना हो मुकेश राई । हुनत मैले देखेको भेटेको छैन, मुकेश राईलाई तथापि मलाई यस्तो लाग्छ । मुकेश राई अल्पभाषी, शालीन र मिलनसार प्रविर्तिका छन् । हुनत कवितामा भावना त सबैको एकनास नै हुन्छन् । जस्ले पनि आफ्ना भावनाहरूमा आफूलाई देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति र आफूलाई समर्पित बनाएर आफूलाई पोखेका हुन्छन् तर मलाई भने किन किन मुकेश राईका भावनाहरू साँच्चै नै उनका मनका गहिराईबाटै निस्केका ध्वनिहरू हुन् भन्ने लागेकोछ । शायद मेरो मुकेशप्रति एउटा आदरभाव पनि जागेको हुन सक्छ । जे होस् उन्ले लेखेका कविताहरूमा मानव जीवनले भोगिरहेका कथाहरू नै कुँदिएका छन् जस्लाई सबैले सजिलै आत्मासात गर्न सक्दछन् । मलाई भने उन्को एउटा कविताले असाध्यै मन छोयो त्यो कविता हो । “आरोहअवरोह”भित्र समेटिएका यी शब्दहरू ।
अशोकका ‘FUSION प्रतिविम्वभित्र’ चियाउँदा पग्लेका भावनाहरू
कविता संग्रह निकाल्नेहरूका भीडमा प्रवासमा रहेर पनि धेरैले आफ्ना नामहरू अंकित गरिरहेका छन्। साहित्यको भकारीमा । यसै भिंडमा अर्को एउटा शसक्त हस्ताक्षरको नमुना हो अशोक पार्थिव तामाङ । जस्को कविता सँग्रह “प्रतिविम्व” केही दिन अघि मेरो हातमा परेको छ । जसलाई म समय चोरी चोरी पढ्ने जमर्को गर्दैछु । बिदेशमा रहेर पनि साहित्यप्रतिको झुकावलाई यी प्रवासी मनहरूले त्याग्न सकेका छैनन् । पुराना दिनहरूमा कलाकारिता रुचाउँने अशोक बालककालदेखि नै कविता लेख्न पनि रुचाउँथे । जब उनी बिदेश भासिए अनी उनीभित्र देश प्रेमका कुण्ठित भावनाहरू सल्बलाउँन थाले। बिदेशका भोगाईका उनका प्रतिविम्वहरू शब्दको थुँगा बनेर किताबी रूपमा यसरी प्रतिविम्वित बनेर छाए ।
अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) कोलोराडो च्याप्टरको नियमित साहित्यिक कार्यक्रम “कोलोराडो साहित्य संगम”को अगस्त महिनाको कवि गोष्ठी कार्यक्रम कवि कपिल सुबेदी तथा श्रीमती देवी आचार्यको आतिथ्यमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।
जिन्दगीको हिसाब किताब कसो गरी चुकाऊँ म ?
ब्यथा बढ्यो मनभरि कसो गरी लुकाऊँ म ?
संसारको रीत नै हो सुख दु:ख भोग्नु पर्ने
मनभित्रका सारा पीडा कसो गरी फुकाऊँ म ?
सबको आँखा छल्दै पनि आउँथे म रातमा
उपहार दिन ल्याउँथें गुलाब फूल हातमा ।
जब मेरा पाउँजु बझ्थे धड्कन बढ्थ्यो तिम्रो
सम्हालिँदै आउँथे म फँस्न तिम्रो बातमा ।
अनेसास कोलोराडोको नियमित कवि गोष्ठी सम्पन्न (२०११, जुलाई)
अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) कोलोराडो च्यापटरद्वारा संचालित मासिक कवि गोष्ठी कार्यक्रम यो पटक कवि तथा बरिष्ठ साहित्यकार शैलेन्द्र साकार र वहाँका सुपुत्र अनुरक्त श्रेष्ठको आतिथ्यमा सफलतापूर्वक वहाँहरूकै निवास फोर्थ कोलिनमा सम्पन्न भयो ।
यति खेर मेरो हातमा नयाँ स्वादको, नयाँ ढंगको अनि नयाँ हातको, हृदयबाट नै अर्पित ‘प्रेमिल शब्द थुँगाहरू’ “लुङ्मारी मिथक” कवितासंग्रह छ । म स्वाद मानी मानी बिदेशी भूमिमा यो पट्यारलाग्दो समयमा यही संग्रहको रसास्वादन गरिरहेकी छु । मुहार पुस्तिकाको माध्यमबाट परिचित बहिनी मनुको आगमन साहित्य क्षेत्रमा एउटा सशक्त कविको रूपमा मानेकी छु मैले । पहिला पहिला साधारण गीतहरू मात्र लेख्ने उनका औँलाहरू अहिले आएर यति सशक्त कविता लेख्नमा पनि पोख्त भएको देख्दा लाग्छ, नारी हस्ताक्षरहरूमा साहित्यले अर्को पृथक र ओजिलो हस्ताक्षर प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।
“लुङ्मारी मिथक” मा कवि मनुले आफ्नै लोहोरुङ भाषालाई उभ्याएर शीर्षक राखेकी छिन् । उन्को अर्थमा लुङमारीको आशय “हृदयबाट अर्पित प्रेम” अर्थात छुट्टै प्रकारको प्रेम जो अन्य प्रेमभन्दा पृथक प्रेम आफ्नो देशको साहित्यलाई माया गरेर अर्पण गर्न चाहेकी छिन् र यो छुट्टै पनि लाग्दछ । लगभग ३०/३२ वटा मात्र संग्रहित कविताहरू भए पनि गन्तीको हिसाबले न्युन लाग्दछ तर सन्देश र अर्थको हिसाबले यी कविताहरू सयौं लादछन् ।
अनेसास कोलोराडोको नियमित कवि गोष्ठी सम्पन्न (२०११,जुलाई) तथा १९८ औं भानु जयन्ती र अनेससासको बीसौं वार्षिक उत्सव
जुलाई १८, २०११ डेन्भर (कोलोराडो)
स्व. आदिकवि भानुभक्त आचार्यको १९८ औं जन्मजयन्ती र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास)को २० औं बार्षिक उत्सवको उपलक्षमा अनेससास कोलोराडो च्याप्टरले गत जुलाई १५/१६/१७ तारिकका दिन बिभिन्न कार्यक्रम बिभिन्न स्थानबाट पाल्नु हुने महानुभावहरूको आतिथ्यका साथ सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्‍यो ।
जुलाई १५ तारिकका साँझ प्रथम चरणमा साँस्कृतिक कार्यक्रम र प्रशिद्ध लोक दोहोरी गायक रामप्रसाद खनालको एकल दोहोरी गायन थियो भने कार्यक्रमको समुद्घाटन अनेसासका संस्थापक अध्यक्ष होमनाथ सुबेदीबाट गरियो ।
अनेसास कोलोराडोको नियमित कवि गोष्ठी सम्पन्न (२०११, जून)
अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) कोलोराडो च्याप्टरको नियमित कवि गोष्टी सधैं झैँ यो पटक पनि बिजयदेव अधिकारी र तारा अधिकारीज्यूको आतिथ्यमा सफलतापुर्वक यही शनिबार २५ जुनमा सम्पन्न भयो ।
केही काम नपाएर नेता छान्ने मात्र भयो ।
ढुक्दै बस्यौँ संबिधान कहिले पो लेख्ला भन्दै
भुत्रो लेख्नु संबिधान खुट्टा तान्ने मात्र भयो ।
बुद्ध जन्मे नेपालकै माटोमा
लाग्नु छ हामीले उनकै बाटोमा
शान्तिको बिज छरौँ सबै मिली
लगाउँ मल्हम अशान्तिको खाटोमा ।